सर्वोच्चको आदेशले डा. रौनियारलाई भन्दा गगनलाई फाइदा | My News Nepal
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री गगनकुमार थापाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई नियुक्ति गर्दा करोडौं रुपैयाँ लिएको अहिले आएर खुलासा भएको छ ।
मन्त्री थापाले लिएको रकमका बारेमा रौनियारले नै अहिले आफू निकटका पत्रकारहरूलाई बताउँदै हिड्न थालेपछि यसको रहस्य बाहिर आएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले रौनियारलाई हटाएर प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको कायम मुकायमको जिम्मेवारी रजिस्टार गुरु खनाललाई दिएका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले रौनियारलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गरिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार यादवले रौनियारलाई हटाएलगत्तै तनावमा परेका उनले थापासँग भेट गरी आफ्नो करोडौं डुबेको र आफूलाई नै उपकुलपति बनाउनु प¥यो भनेर दवाव दिएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन रौनियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर करोडौं लिएको भनेर घोषणा गर्ने चेतावनी दिएपछि थापाले पैसा फिर्ता गर्ने आश्वसन पनि दिएको मन्त्रालयमा हल्लाखल्ली चलेको थियो । तर, थापा र रौनियारको विवाद चलिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले रौनियारलाई नै उपकुलपतिमा मंगलबार थमौती गरिदिएपछि विवाद सेलाएको छ ।
रौनियारलाई पैसा फिर्ता गर्न नपरेपछि गगन थापा पनि सहज रुपमा अमेरिका उडेका छन् । थापाकै डिजाइनमा केही दिन अगाडि डा.गोविन्द केसीले विज्ञप्ति जारी गरेर विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको विरोध गरेका थिए । डा.केसीको विज्ञप्तिलाई पछिल्लो समय थापाको करोडौंको घुस प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले करिव दुई अर्बको भवनहरू बनाउँदै छ । ती भवनहरू कमिशनमा कुरा नमिलेपछि रौनियारलाई हटाइएको थियो । अहिले फेरि रौनियार सर्वोच्च अदालतबाट थमौती भएपछि दलालहरूलाई तनाव भएको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )